Ngaphantsi kweWalnut Ebalaseleyo (imizuzu engama-20 kumntla weLondon)
Yima ngekhefu elizolileyo nelipholileyo kwindawo yethu entsha ehlaziyiweyo ye-400 sq ft yeendwendwe enomnyango wabucala oncanyathiselwe kwikhaya lethu eliyimbali. Vula iingcango zepatio yangasemva kwiyadi entle enegadi ezithandekayo, i-gazebo, iphuli eshushu (evula ngoMeyi ukuya kuSeptemba) kunye nendawo yokuhlala ukuze uyonwabele. Ibhedi ye-murphy elingana nokumkanikazi, ikhitshi elixhotyisiweyo, iisofa ezitofotofo, iWiFi yasimahla, iTV enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala eliphangaleleyo zenza ukuhlala kwakho kugqibelele. Isidlo sakusasa selizwekazi sifakiwe.
Ikhaya elicocekileyo, elizolileyo, elinembali lihlaziywe ngokupheleleyo. Indlu edibeneyo enesango labucala. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle likuvumela ukuba uzilungiselele ukutya kwakho. Kwabelwana ngasemva kweyadi. Abanini banezinja ezincinci ezi-2.
Akukho kutshaya okanye ukufunxa
5.0 · Izimvo eziyi-124
Idolophu encinci enobuhlobo enevenkile yegrosari eneLCBO, ivenkile yehardware, ivenkile yeziyobisi, isikhululo segesi kunye nevenkile ethengisa izinto ezahlukeneyo kunye nevenkile yobumba. Indawo ezolileyo enoxolo apho unokuhambahamba kwipaki ethandekayo ehamba ecaleni komlambo ekupheleni kwedolophu. Yonwabela isidlo kwindawo yaseCrown kunye neTurtle Pub phezulu nje esitratweni.
Abamkeli abakhoyo kwisiza. Ikhowudi yokungena yokungena ithunyelwe ngokubhaliweyo..